Guddoomiye Fanax oo sharcidaro kusheegey xilka qaadista lagu sameeyey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Guddoomiye Fanax oo sharcidaro kusheegey xilka qaadista lagu sameeyey
Guddoomiye Fanax oo sharcidaro kusheegey xilka qaadista lagu sameeyey
Sheekh Axmed C/laahi Xuseen (Fanax) oo ah Guddoomiyihii Makxamadda Sare ee maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay Idaacadda Radio Baidoa ayaa ka hor yimid xilka qaadistii uu ku sameeyay Madaxweyne Shariif Xasan.
Warqad ku taariikheysneyd shalay oo aheyd 18/12/2017 ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu aqbalay xilka qaadista ay Gudoomiye Sheekh Axmed C/laahi Xuseen (Fanax) ku sameeyeen Golaha Addeegga Garsoorka.
Guddoomiye Sheekh Axmed C/laahi Xuseen (Fanax) ayaa sheegay xilka qaadista lagu sameeyay inaanan loo marin sifo sharci ah, welina aysan soo gaarin warqad cadeyneysa in xilka looga qaaday, wuxuuna tilmaamay waraqadan in ay la mid tahay warqado maalmihii dambe ka soo baxayay xafiiska Madaxweynaha kadibna la beeninayay.
Wuxuu sheegay weli inuu isaga yahay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Maamulka Koonfur Galbeed shaqada Maxkamaddana ay ka sii socoto Gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalada Afgooye, oo hada dayactir lagu wado xarunta Maxkamadda, isaga oo sidoo kale tilmamay in hada ay si caadi ah u shaqeynayaan Maxkamadaha Racfaanka.
Sidoo kale wuxuu sheegay talada in ay u taalo xildhibaanada, Siyaasiyiinta iyo bulshada ku dhaqan degaanada Koonfuer Galbeed, wuxuuna ku baaqay inaan lagu cayaarin masiirka shacabka Maamulkaasi.
Ugu dambeyn Guddoomiye Fanax ayaa sheegay markii uu xilkan qabanayay inuu u yeeray Madaxweyne Shariif Xasan, hadana ay sharaf badneyd inuu si toos ah ula soo xiriiro, balse waxa dhacay aysan aheyn wax wanaagsan.
29-kii October ee sanadkan Sheekh (Fanax) ayaa sheegay in Makxamadda Sare ee maamulka Koonfur Galbeed ay amni daro darteed uga soo guurtay magaalada Baydhabo ayna u soo wareegtay Magaalada Afgooye.